Omkhulu, okungenakuqhathaniswa, actress ukubukeka! Lena akuyona tonkhe tichasiso letisetjentiswa engqondweni ukuza inkumbulo ULyudmila Gurchenko. Kubonakala sengathi ukuphila ladies brilliant kwaba Licwathile, kodwa akuyona. Ngemva kweminyaka eminingi iziphathimandla lwanyamalala ngokuphelele iminyaka actress - kungcono nosizi. Kodwa ake konke ukuze.
Biography Gurchenko iqala emuva ngo-1935, lapho ngoNovemba 12, yena wazalwa ngo kwedolobha laseKharkov. Umama Ludmila babevela kwamadoda asebukhosini, noyise, ngakolunye uhlangothi, wayevela elula ipulazi ngesandla umndeni. Nokho, lokhu akuzange kumvimbe ekubeni umculi okhokhelwayo. Le ntombazane lahamba ezinyathelweni kayise - iziqu umculo esikoleni.
Ukuqala ngendlela yokudala
Ngo-1953, Lucy kuqede ukuqeqeshwa esikoleni samabanga aphakeme, bese wasuka Kharkiv eMoscow ukungena Film Institute. Ngo biography dolobha Gurchenko agcwaliswa kuyiqiniso ephawulekayo - intombazane wathatha ukuze inkambo yakhe uTamara Makarova futhi Sergei Gerasimov. Ngaphambi uphothula, actress esizayo waqala ukusebenza studio yaseshashalazini umlingisi.
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi wangenela in ebhayisikobho ULyudmila Markovna e ifilimu "Road Leqiniso", eyakhishwa ngo-1956. Kodwa umdlali odumile wenza wezithombe ezinyakazayo ngenkathi Eldar isencane kakhulu Ryazanov sika "Carnival Night", edlalwe yokuqala ngomnyaka ofanayo. Le filimu kwaba nempumelelo enkulu, futhi Lenochku Krylovu Gurchenko kwenziwa nje ngobusuku obubodwa wayazi nabathandwayo lonke lelo zwe. Ngemva konyaka, yena okunenkanyezi ifilimu "The Girl nge isiginci", okwakuyindawo zithandwa, kodwa ngemva kwalokhu iminyaka eminingi ULyudmila akazange athathe indima enkulu.
Siyini isizathu salokhu - alwaziwa. Rumour has it ukuthi ukuba umdlali cishe Ukukhohlwa waleso yena sinqatshiwe sokuqomisana of isikhulu esiphezulu. Abanye bakholelwa ukuthi isizathu ukuvinjelwa engabhaliwe ku kudubula ukuthi waqala baziphilise yakhe emhlanganweni zokudala nezethameli, okuyinto asikhuthazeki yini futhi kubhekwa engathandeki ezengeziwe itoho kuleyo minyaka. Kwaphela iminyaka eminingana wayengayi isinyathelo kwamaqhaza ezincane.
"Sokuzalwa Okwesibili" e cinema
Nalapha ukukhombisa ithalenta lakhe olunzulu Gurchenko waba nenhlanhla ngokwanele ngo-1972, lapho wahlanganyela ukuthwetshulwa movie "kusho uCaptain noGwayi". Khona-ke, ngo-1974, umdlali kudlalwa lolungenamaphutsa ku "Straw Hat", futhi ngo-1976 - movie "Mama." Izingane inkanyezi ULyudmila Markovna e "Mame", wakhuluma ngokufudumele ngaye. Bathi ukuthi wabasiza ukuba singene indima bazokhuluma ngobuqotho nangomusa.
Okulandelayo Gurchenko biography liyakhuluma ngokuphela impumelelo komuntu Yiqiniso, akuyona wokugcina. Kuyinto ngebhayisikobho zomculo "waseZulwini Swallows", lapho wadlala ukwamukela Karina. Ngemva le ndima, izilaleli ekugcineni bayaqiniseka ukuthi lokhu onamakhono indoda. Phela, lolungenamaphutsa hhayi kuphela eyenziwa izindima yabo, kodwa yena wasina futhi bacula kahle.
Creative biography Gurchenko ocebile igcwaliswe. Lokho kuphela iyona "Uthando kanye amajuba"! ibinzana Yakhe "Lyudka futhi Lyudka?!" usazoba umsindo eside phezu izindebe eziningi ... Amafilimu nge ULyudmila Gurchenko namanje ngenjabulo wabukela yizigidi ababukeli.
amabhayisikobho Izintandokazi - njengenhlangano inkumbulo okuphakade
Khanyisa, ngomusa, actress ebukekayo awuzange March 30, 2011. Ukufa Ludmila Gurchenko abalandeli kanzima asebeke badlula kukho. Kodwa ama-movie ne iqhaza lakhe, okuyinto athokozise, bayophila isikhathi eside!
Le filimu "About Time": nabalingisi izinhlamvu
Renly Baratheon - umlingisi Getin Entoni: Biography, iqhaza "Game of Thrones", amaqiniso athakazelisayo
Actress American futhi imodeli Bruk Berk
I lithathelwe best of zakudala uhlu izincwadi. Le filimu lithathelwe imisebenzi zakudala kwezincwadi Russian nesiNgisi
Amazwibela "Mumu" Turgeneva I. S.
Ukuhlaziya kahle ukusetshenziswa kwezimali ezimpahleni ezingasuki phansi.
Lapho kudlula khona amazinga we-TRP, yiziphi izivivinyo ezifakiwe kuzo?
Salad "Marseille". embodiments abahlukahlukene Ukudla
Lymph node ekwelapheni entanyeni izimbangela
Ukuvakashela Dubai ngo-February: izithombe, izincomo kanye nokubuyekeza